Holatra | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Ny fahasamihafana eo amin'ny holatra azo hanina sy ny sandoka, ny fomba hanavahana ny alikaola eo amin'ny holatra mahazatra
Ny holatra holatra dia heverina ho iray amin'ireo holatra fanao malaza indrindra. Mazava ho azy, amin'ny endrika mangatsiaka na marihitra, afaka mora amin'ny varo-maizina izy ireo, saingy ny holatra izay mitombo amin'ny tarehy dia tsy mitovy ny tsirony sy ny fofona tahaka ny an'ny ala. Na izany aza, mila mahatakatra tsara ny holatra izay tokony hanangona sy hihinana azy ireo raha tsy mampidi-doza ny fiainany.
Karazana tantaram-piraisana tsy azo itokisana, fanampiana voalohany ho an'ny poizina amin'ny amboahaolo
Ny tantaram-pofon'ny honko dia tian'ny olona rehetra. Ny karazan-tsoratra voafaritra amin'ny literatiora na amin'ny Internet dia ahitana ny 22 amin'ireo karazany ireo, na dia ankatoavin'ny ankamaroany aza fa misy karazana 34 karazana. Mihamaro ireo holatra ireo mandritra ny taona. Mihamaro eo amin'ny hazo izy ireo, mitombo ao amin'ny fianakaviana ao an-kibon-dreniny, indrindra fa mamono.
Ilaina sy manimba ny holatra holatra
Milanja tantaram-pitiavana (Lactarius resimus) - Ny fitomboan'ny holatra amin'ny karazana laktika dia mitombo ao anaty vondrona. Antsoina koa hoe mena, fotsy, mena, na mavo. Mitombo eo akaikin'ny hazo biriky, mamorona mycorrhiza - rehefa misy mycelium misy holatra eo amin'ny fakan'ny hazo. Ny hoditry ny holatra dia fotsy mavo sy fotsy mavo, maina, rakotra moka, misy faritra mifangaro.
Cep - karazana
Ny anaran'ilay holatra fotsy dia nalaina tamin'ny antitra. Avy eo dia maina ny holatra. Ny fotolaky ny fotony fotsy dia fotsy foana dia fotsy lavalava taorian'ny fanasarahana na ny fitsaboana. Izany no anton'io anarana io. Ny voan'ny fotsy dia an'ny karazana Boletus, noho izany dia ny faharoa no anaran'ilay holatra fotsy dia ilay boletus. Zava-dehibe izany! Rehefa avy nanangona ireo holatra dia mila manomboka avy hatrany ny fanodinana azy ireo, satria very maina ny fambolena fotsy.
Ahoana no hambolena holatra ronono amin'ny ririnina: maina, sira, mangatsiaka
Ny tsiro mafana mangatsiaka sy ny elasticity ny fisotroana ronono dia mamorona olana maro ho an'ireo mpitaiza ao an-dakozia, indrindra rehefa manomana ny ririnina. Te hanaisotra ny alahelo vokatry ny ronono miloko aho, ary mitazona ny fahasamihafana voalohany. Na dia teo aza ireo toetra mifanohitra ireo ny holatra, dia mbola nahita toerana ho azy ireo tao amin'ny lovia maro izy ireo.
Boletus Mushroom: famaritana, karazana, fahasamihafana
Any anaty ala mikitroka sy mifangaro dia ahitanao holatra, izay, matetika, dia mitombo eo akaikin'ny moss, noho izany ny anarana - onja. Afaka mihaona aminy hatramin'ny fiandohan'ny fahavaratra hatramin'ny faran'ny fararano. Ny karazany rehetra dia heverina ho azo hanina, saingy azo atao ny misafotofoto amin'ny fiaramanidina sandoka - parasy. Ity no lahatsoratra, izany hoe, ny fomba hanavahana ny tena lalan-drala amin'ny poizina iray ary ny mety ho azo hanina na tsia.
Teknolojia mitombo any an-trano
Mandritra ny fotoana dia maka toerana mavesa-danja eo amin'ny fihinanan'ny olona maro. Sangisangy izy ireo, mora ny manomana ary tena sarobidy: afaka mividy azy ireo any amin'ny fivarotana lehibe rehetra. Fa raha mbola manapa-kevitra ny hikarakarana ny tenanao sy ireo olon-tianao ianao miaraka amin'ireo ambolomailim-borona manana alim-bahiny, dia mila fahalalana sy ezaka ianao.
Raha te hamboly fako ao an-trano ianao, dia mila manontany tena aloha ianao hoe: inona io ary inona no anananao? Raha ny zava-drehetra, ampy ho an'ny sakafo sakafo mahavelona ho an'ny fianakaviana dia ampy ny boaty vitsivitsy ao amin'ny lakalin-trano na zaridaina zaridaina. Fa raha manapa-kevitra ny handamina famokarana be dia be ianao, dia tsy mila sehatra lehibe sy manokana, fa fitaovana, fitaovana, vola be sy sarany, ary fahalalana.
Karazana solika sy ny toetrany
Na ny mpangalatra pilina tsy manana traikefa aza dia tsy mifangaro amin'ny holatra hafa karazana, satria ny anarany dia miteny ho azy: ny holatra rehetra amin'io karazana io dia manana hoditra malemy. Ny karazana holatra Boletus dia karazany 40 mahery. Amin'ny ankapobeny dia antsoina hoe valiha ireo famokarana rongony ao amin'ny fianakaviana Boletov. Matetika izy ireo dia maniry any anaty ala mando, miangona sy alika, fa ankoatra izay, afaka hita eny rehetra eny eny amin'ny planeta izy ireo, manamarika ny toetr'andro, ary na dia any Afrika sy Aostralia aza.
Famaritana ny karazam-borona
Ny teny hoe "gruzd" amin'ny dikanteny avy amin'ny teny slavonan'ny Fiangonana dia midika hoe "antontam-bato". Tsy mahagaga raha nahazo io anarana io izy ireo. Tany am-piandohan'ny taona tany Rosia, mpangalatra ny holatra dia nanangona ny sarety ary natsipy tao anaty barika. Ny karazam-bolo rehetra dia mampifandray ireo endri-pirahalahiana iombonana: ny mason-tsivana eo amin'ny vatany dia hita ary ny fiovana dia miova amin'ny fitomboan'ny holatra - voalohany dia miharihary ary avy eo ny fantsom-baravarana izay mamatotra.
Fomba fanangonana menaka ho an'ny ririnina any an-trano
Maslata - ireo holatra tena malaza eo amin'ireo mpangalatra holatra sy mpankafy ity vokatra ity. Tsy mahagaga àry raha maro ny fomba fikarakarana sy ny fomba fanomanana azy ireo. Ary ny mpitaiza tsirairay dia afaka mirehareha amin'ny, ny olona tsirairay. Misy ihany koa fomba maro hambolena menaka ho an'ny ririnina. Ny menaka fanosotra Ny fomba tsara indrindra amin'ny fambolena holatra amin'ny ririnina dia maina, izay tsy manimba ny sakafo sy ny tsiron'ny vokatra.
Famaritana momba ny kisoa holatra miaraka amin'ny sary
Nandritra ny taona maro, nanangona kisoa ny olona ary tia azy ireo noho ny tsirony manokana sy ny fanomanana azy ireo. Ireo mpitsangona holatra efa za-draharaha dia manantitrantitra fa tsy misy fiarovana tanteraka ireny holatra ireny, ampy handrodana azy ireo izany ary hamehezana azy ireo alohan'ny hanina. Mifanohitra amin'izany fanambaràna izany, misy ny fiheverana momba ny loza sy ny toetry ny fanomezana ala.
Azo atao ve ny mihinana holatra mainty hoditra: ahoana no hanavaka ny holatra tena izy avy amin'ny diso
Ny holatra mena dia ny holatra izay malaza indrindra amin'ny gourmets. Ny ala, izay misy holatra ranom-boasary, dia tena mety ho an'ny mpilalao holatra. Na dia eo aza ny lazan'izy ireo, ny Gordians dia miafina amin'ny mason'olombelona ary miafina eo ambanin'ny ravin-kazo manakaiky ny kibony sy ny havoana hafa. Noho izany, ny fandinihana ny karazana mycobionts, tsara kokoa ny maka tsora-kazo aminao mba hijerena ireo toerana rehetra mety hitomboan'ny holatraola.
Karazana kisoa sy ny toetrany
Ny svinushka holatra dia malaza be sy fantatry ny mpikaroka holatra. Toa efa ela talohan'ny holatra hafa dia manangom-bokatra hatramin'ny fararano fararano. Fantatrao ve? Araka ny filazan'ny ivelany, ny holatra svinushka dia mitovy amin'ny sofin'ny kisoa. Io fitoviana io dia mijery amin'ny kapila mihamitombo ao amin'ny holatra. Ny anton'izany dia ny tongotra, izay tsy mifatotra eo afovoan'ny kapa amin'ny holatra, fa nafindra toerana.
Ny teknôlôjia momba ny famokarana Mycelium (mycelium): ny fomba hampitombo ny mycelium any an-trano
Sambany vao fantatsika hoe inona ny miozoliana ao amin'ny kilasin'ny biôlôjia, saingy maro no tsy mahatakatra hoe nahoana no ilaina ny mampitombo azy io sy ny fampiasana azy. Amin'ity lahatsoratra ity dia hijery ny fomba hampivoarana ny mielelioran'ny fungi, ny antsipiriany momba ny fitomboan'ny mycelium, ary aloha indrindra fa hijery izay tena izy isika. Inona no atao hoe mycelium ary nahoana no mitombo izany? Matetika ny mycelium dia antsoina hoe mycelium, andeha hojerentsika hoe inona izany.
Ny holatra marevaka dia mitovy amin'ny voapoizina, ary mety ho sarotra ny manavaka azy ireo na dia eo aza ny mpitsangatsanganana. Ohatra, manana fomba fitoviana maromaro miaraka amin'ny tsipika ireo moraly, ary matetika izy ireo no misafotofoto, manangona ao anaty harona iray. Hiresaka momba ny fahasamihafana eo amin'ny moraly sy ny tsipika ato amin'ity lahatsoratra ity isika. Morel tsotra: famaritana Morel (lat.
Ny holatra aspenina - karazana holatra azo hanina miaraka amin'ny tongotra matevina sy kapa matevina. Ireo solontenan'ny bibidia dia mitombo ao anaty ala any Eorazia sy Amerika Avaratra. Noho ny tsy fisian'ny poizin'ny karazan'io holatra io dia vitsy no manavaka azy ireo. Andeha hojerentsika ny karazam-borona aspen ary inona ny toetrany.
Karazan-tsakafo sy toro-hevitra ho fanangonana holatra
Ny holatra voatokana ho an'ny ririnina ao an-trano ... Misy mihoatra ny sakafo mahasalama amin'ny fanaovana an'ity sakaiza ity. Ary amin'ny fahatsiarovana iray monja amin'io zava-manitra mahavariana mahavariana io, dia mitsambikina ao anaty laoniny ny gourmet tsirairay. Na izany na tsy izany, sakafo mahavariana toy izany dia hameno sy hanatsara ny sakafo amin'ny fety rehetra.
Ahoana no tsy hahatongavana amin'ny boletus sandoka: lisitry ny holatra tsy azo sakanana
Ny Boletus na bolt dia efa nampiasaina tamin'ny sakafo. Misy sakafo homana, mihinana fihinana sy tsy azo sakanana. Ity fianakaviana feno holatra ity dia iray amin'ireo karazana solontenan'ny karazam-bary malaza indrindra - ny holatra fotsy. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny fomba fijery cep, ny fomba hanavahana ny holatra tsy azo sakanana sy ny fihinanana voankazo, izay karazana boleta.
Ny holatra fandrefesana dia karazana holatra feno fialam-boly, izay matetika no hita eny amin'ny talantalana. Ho an'ireo izay maniry manokana manomana ireo holatra holatra amin'ny endrika maina ho an'ny fitehirizana maharitra, dia hilaza aminareo ny fomba hanaovana izany tsara, mba tsy handiso fanantenana anareo amin'ny hoavy. Azo atao ve ny manasitrana holatra mainty? Misy torolalana miverimberina ao amin'ny Internet momba ny fomba famonosana holatra, holatra fotsy sy karazana holatra hafa, saingy tsy misy fanazavana momba ny holatra holatra, satria ity vokatra ity dia tsy malaza amin'ny famonoana.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Holatra